Araka ny fanazavana azo teny an-toerana, dia aotrika ny fako, izany hoe potehina ny fako, vao lasa zezika tanteraka. Voalaza fa misy lavakabe hanariana fako toa ny ozinina eny Andralanitra, ka ny zavatra mora potika sy/na lo no hahodina ho lasa zezika. Manary fako voalohany ao anaty lavaka ny kamiaon’ny Samva, dia atosiky ny “buill” iny, dia tonga ny fanariana fako fanindroany, dia voatsindrin’iny fako voalohany iny, tonga ny fahatelo dia voatsindrin’iny ny faharoa, dia toy izay hatrany ny fako ariana ao anatin’io lavaka be io, izay havadika ho zezika. Manivana ny fako ahodina ho zezika koa io ozinina io, ka misy “grillage” amin’ny sivana. Misy koa ny “deuxième” sy “prémière qualité” izay mamoaka karazana zezika “Téro” na zezika “composte”. Ny fako toy ny sachet, vy, tavoahangy, vato, plastika dia tsy potika sady tsy lo ary tsy azo havadika ho zezika, hoy ny fanazavan’ireo mpiasa. Karazana orinasa telo, mampiasa olona no manao zezika eny Andralanitra, ka eo ny “Mada composte”, ny “Stoi” ary ny “Agrivet”. Manampy azy ireo koa ny tanora tezain’ny mompera Pedro, ka miisa 90 lahy izy ireo no manao io zezika io. Nambaran’izy ireo hatrany fa hambolena voninkazo, gazon, legioma … ny zezika vita eny Andralanitra. Ny kamiao iray dia mitaona zezika 5m3 ao anatin’ny iray andro, hoy ny fanazavana. Marihina fa tsy mandray karama ireto 90 lahy ireto fa izay zezika lafo no handraisan’izy ireo karama, araka ny fantatra hatrany.